Izinwele zezinwele zanamuhla: imibono yesitayela sezinwele zakho | Amadoda aSitayela
Izinwele eziningi zesimanje zigxila kukho konke ukuvelela engxenyeni engenhla yezinwele. Kepha igama lesimanje lapha lingadukisa, kusukela izitayela ezicelwa kakhulu ezindaweni zokugunda namuhla yizona zakudala: izinwele ezimfishane ezinhlangothini nape futhi zinde phezulu.
Okunye (okukhona, yize kungabonakala ngenye indlela) ukusikeka okuthe xaxa ukuthi, esikhundleni sokugcina izinwele zisetshenziswa ngesiqeshana sezinwele, zama ukusizakala ngezimfanelo zazo. Uma ufuna okuthile ngendlela yakho kune-gradient, kunezinketho ezithakazelisayo zezinwele eziqondile, ezi-wavy nezisontekile..
1 Izinwele zezinwele ze-gradient
2 Izinwele zezinwele ezingaphansi
3 Imibono eminingi yanamuhla yokugunda izinwele
Izinwele zezinwele ze-gradient
Kunezindlela ezimbili ngokuyisisekelo zokugqoka izinwele zakho ezimfishane ezinhlangothini futhi zinde phezulu: nge noma ngaphandle kwe-gradient (eyaziwa nangokuthi i-undercut). Yize inemiphumela ehlukile, zombili izinketho zingamadoda futhi zingenziwa ngezifiso kakhulu futhi ziguquguquke uma kukhulunywa ngesitayela.
El haircut izinwele Kunokwehluka okuhamba kancane ezilinganisweni phakathi kwengxenye engezansi nengxenye engenhla yezinwele. Ukuqalisa isikliphu sezinwele phansi ezinhlangothini ukuya kunombolo yesithathu kuyisiqalo esihle. Kepha uma kukhulunywa ngama-gradients, asikho isilinganiso esizenzakalelayo.
Ingxenye engenhla ishiywa isikhathi eside ngosizo lwesikele. Kodwa-ke, kukhona nezinguqulo ezimfushane (ezinye zenziwe ngokuphelele ngama-clippers) ezizonikeza izinwele zakho umoya wezempi. Noma ngabe yinde noma imfishane, ukhiye wokwenza ukuthi isebenze ukuhlala uqinisekisa ukuthi ubude buyanda (noma buyancipha uma sibubuka kusuka phezulu kuye ezansi) ngendlela ebushelelezi nengokwemvelo.
Lokhu kusika kunikeza isisekelo esihle sezinhlobonhlobo zezinwele. Izitayela zezinwele ezikhanyayo nezicwebezelayo ziphakathi kwezinketho ozithandayo. Uma eyakho kungeyona i-toupee, cabanga ukuhlukana ohlangothini lwencazelo eyengeziwe kwisitayela sendoda yebhizinisi.
Ukubheja okuphephile kuyo yonke iminyaka, ungaguqula le ndlela yokugunda izinwele izitayela ezihlelekile nezingakahleleki ngosizo lwekhanda elihle. Isebenza futhi nakho konke ukwakheka kobuso, ngoba enye yezinzuzo zayo ukuthi kungenzeka ukwenza ukuhluka okuncane ukuthola umphumela olinganayo. Enye yezimfihlo zobuso obude ukuqala ngenombolo ephakeme ezinhlangothini, noma ukwenze ngqo ngesikele.
Izinwele zezinwele ezingaphansi
Ukunqunywa kwezinwele okungaphansi kukhululekile ngokwengeziwe ngenxa yokuthi unokweqa okungazelelwe phakathi kwangaphansi nangaphezulu kwekhanda. Izinhlangothi kanye ne-nape kunqunywe kakhulu, kuyilapho phezulu kushiyelwa isikhathi eside. Ngokungafani ne-gradient, phezulu kunqanyuliwe kusuka phansi. Ngale ndlela, akuyona ukugunda izinwele okufushane noma okude, kepha ukuhlanganiswa kwakho kokubili.
Ubude bezingxenye zombili buncike kokuncamelayo kwakho. Kodwa-ke, uma ufuna ukuzuza kakhulu kulokhu kugunda izinwele, udinga ukuqinisekisa ukuthi umehluko ezilinganisweni uyabonakala.
Uma kukhulunywa ngesitayela sokugunda izinwele ngaphansi, kunezinketho eziningi. Uzoba nethuba lokukhetha i-toupee, i-bangs, ukuhlukaniswa ohlangothini, ukubuyela emuva noma ukukhothama ngokuya ngokuthi yini oyibona ifanele kakhulu kumcimbi ngamunye.
Kubuyiswe kusukela ngekhulu leminyaka elidlule futhi kwavuselelwa izizukulwane ezintsha, lokhu kunqunywa kwezinwele okufushane ezinhlangothini futhi kubude phezulu kuzosebenza kahle uma indlela yakho yokugqoka isitayela sasemadolobheni.
Imibono eminingi yanamuhla yokugunda izinwele
Ukunqunywa kwe-buzz noma ukushefa kungenye indlela esikiwe phakathi kosaziwayo. Kulula njengokudlulisa isiqeshana sezinwele siye enombolweni efanayo ekhanda lakho lonke. Izinhlobo ezifushane zingumqondo omuhle wokufihla ukulahleka kwezinwele. Uma unezinwele ezijiyile, ungabeka i-clipper ibe yinombolo ephezulu.
Kunconywa ikakhulukazi ehlobo, izinwele ezifushane kakhulu azidingi msebenzi. Cabanga ngokusikwa kwe-buzz uma ungenazo izinwele ezanele zezinye izinwele, ufuna ukuqinisa ubuso bakho, noma ukuze kube lula.: ukulungela ngesikhathi esincane ekuseni.
Ngabe ukhetha ukugwema ukusikeka okuqine kakhulu? Akuwena wedwa. Ukuhambisa nge-clipper bese ushiya izinwele zinde futhi nendlela yaso (ukuhlala ugcina isimo esithile) kuyinto esefashinini.
Uma unezinwele ezisontekile, ungazama ukugunda izinwele okuyindilinga. UDonald Glover noma uJay-Z baphakathi kwamanxusa amahle kakhulu alesi sitayela.
Ukuphendula i-toupee ethandwayo iyaphela, Kulezi zinsuku, ukusikeka okuningi ngama-bangs nezinwele eziphakathi nakho kuyabonakala. Inketho enhle ye- izinwele ezi-wavy futhi bushelelezi okunikeza izinwele zakho ukuthinteka okuthe xaxa.
Izinwele zikaTimothée Chalamet noMilo Ventimiglia yindawo enhle yokufuna ugqozi ngezinwele ezinde..
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izitayela zezinwele » Izinwele zezinwele zanamuhla